Minisitra Horace Gatien : tsy miova ny tetiandron’ny fanadinam-panjakana | NewsMada
Minisitra Horace Gatien : tsy miova ny tetiandron’ny fanadinam-panjakana
“Tsy maintsy hotanterahina araka ny tetiandro efa napetraka teny am-piandohan’ny taom-pianarana 2017-2018 ny fanadinam-panjakana rehetra”, hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena vaovao, Horace Gatien, omaly taorian’ny famindram-pahefana teny Anosy. Azo vitaina ara-potoana ny fandaharam-pianarana raha miverina haingana amin’ny asany avokoa ny mpampianatra. Efa nihaona intelo tamin’ny sendikàn’ny mpampianatra ny tenany nitady vahaolana amin’ny fitakiana samihafa. Misy ny azo tanterahina izao, eo koa ireo tsy maintsy miandry fotoana hafa fa maika ny famerenana ny fampianarana amin’ny laoniny ho tombontsoan’ny mpianatra. “Afaka miverina miasa avy hatrany ireo vonona hampianatra, afaka manohy ny fifampiresahana kosa ireo tsy mbola resy lahatra”, hoy ny voalazany ihany.
Nambarany fa tetikasa efa nifanarahana amin’ny mpamatsy vola ny tetipivoarana ho an’ny fanabeazana(PSE) ka hotohizana ny fanatanterahana azy. 100 tapitrisa dolara ny sorabola hanaovana ny asa mifanandrify amin’izay efa vonona.
Taorian’ny famindram-pahefana, nitafa tamin’ny tomponandraikitry ny minisitera sy ny mpitarika sendikà ny tenany.
Marihina fa mbola mitohy ny hetsika fitokonana ataon’ny mpampianatra any amin’ny faritra toy ny any Antsiranana, izay manohitra ny fametrahana ity minisitra vaovao ity. Ny any Morondava, Ambositra , Alaotra Mangoro… izay nilaza fa tsy hampitsahatra ny fihetsiketsehany raha tsy voavaly ny fitakian’izy ireo.